Al Shabaab oo go’doomisay deegaan uu ku sugan yahay Abuu Mansuur iyo ciidamo gurmad oo gaaray – SomaliaOne News Network
Jun 30, 2017 Tajuddin GUUXA 0 1631 Views By Tajuddin
Mukhtar Robow Ali “Abu Mansur”
A senior dissident leader of Al Shabaab.
Xudur, Gobolka Bakool, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) – Wararka laga helayo Gobollada Bay iyo Bakool ayaa sheegaya in Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ciidamo gurmad ah u direen Afhayeenkii hore ee kooxda Al Shabaab Sheekh Mukhaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo ku sugan deegaan ka tirsan gobolka Bakool, halkaasina oo uu ku go’doonsan yahay.
Ciidamada gurmadka oo ka dhaqaaqay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa warku sheegayaa inay gaareen deegaan ku dhaw halka uu ku sugan yahay Abuu Mansuur oo raacdo iyo baadi doon ay ugu jirto kooxda Al Shabaab kahor inta aanu isku dhiibin Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa hareereeyay deegaanka Abal oo qiyaastii 20-km u jirta degmada Xudur halkaas uu ku sugan yahay Abuu Mansuur, waxaana deegaankaasi ku xoogan maleeshiyo beeleed ku heyb ah hoggaamiyahani ka fallaagoobay kooxdaasi.
Deegaanka Abal ayaa ah barta uu ku dhashay Abuu Mansuur, halkaasina ay tahay hooyga qabiilkiisa, sidoo kalena uu la nool yahay hooyadiisa.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wadahadalo kula jira Sheekh Mukhtaar Abuu Mansuur ayaa doonaya in culeyska milatari ka yareeyaan, waxa ayna ciidankan damacsan yihiin in ay soo galbiyaan Abuu Mansuur haddii ay isku fahmaan wadahadalka u socda.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka shaqeynaya sidii dowladda Soomaaliya iyo Abuu Mansuur u wada hadli lahaayeen, waxa uuna Shariif u arkaa guul in Abuu Mansuur fikirkiisa uu badalo, iskuna soo dhiibo dowladda.
Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan liiska waxa loogu yeero argagaxisada waxa ay ka saartay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo horey usoo noqday kuxigeenkii Amiirka Al Shbaaab iyo sidoo kale Afhayeenkii kooxdaasi.
Al Shabaab, Maamulka Koonfur galbeed ee Soomaaliya, Mukhtar Robow Ali "Abu Mansur"
Maxaabiis cafis loo fidiyay oo laga siidaayay Xabsiga Dhexe ee Xamar Qaraxyo ka kala dhacay wadada Warshadaha iyo KM13 ee duleedka Muqdisho
Two Somali-American women found guilty...
Ra’iisul wasaare Cumar...
Madaxweyne Xasan Sheekh oo u...
Cali Cabdullahi Cosoble oo loo doortay...
Muqdisho, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) - Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay xaqiijinayeen in qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso uu ka...